व्यवस्थापन समितिको कमजोरीले बिद्यार्थीको भविष्य खतरामा – Mero Pradesh
रामेछाप । सुनापाती गाउँपालिका वडा नम्बर १ गुन्सि भदौरेमा रहेको पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कमजारीको कारण बिद्यालयका बिद्यार्थीहरुको भविष्य खतरामा परेको छ । विद्यालय व्यवस्थापनमा अध्यक्षको एकलौटी निर्णय र हस्तक्षेपकारी भूमिकाका कारणले विद्यालयको भौतिक आर्थिक र शैक्षिक स्थिति नाजुक बनेको स्थानिय धुर्ब चौलागाईले आरोप लगाए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कर्णबहादुर बम्जन अध्यक्ष भएदेखि विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक अवस्था झन कमजोर हुँदै गएको उनले आरोप लगाएका छन् । लामो समयदेखि अनेक प्रपञ्च रचेर अध्यक्ष बम्जनले आफ्नै भाइलाई जागिर खुवाएको पनि उनको आरोप छ । पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालय विक्रम सम्वत् २०३१ सालमा स्थापना भएको पहिलो प्राथिमक विद्यालय हो । यस विद्यालयले कैयौँ दक्ष जनशक्ति इन्जिनियर, निजामती कर्मचारी, शिक्षक उत्पादन गर्ने आधार बनाइदिएको चौलागाईको भनाइ छ । तर केही वर्षदेखि यस विद्यालयले राम्रो व्यवस्थापन नपाएकोले विद्यालयको भौतिक आर्थिक र शैक्षिक स्थिति नाजुक बनेको उनले बताए ।
विद्यालय प्रधानाध्यापक श्यामप्रसाद गौतमसमेत व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको लहैलहैमा लागिरहेको चौलागाईको भनाइ छ । प्रधानाध्यापक समेतको असक्षमता र अपरिपक्व, अदुरदर्शीता, अभिभावकसँग समन्वय, सहकार्य नगर्न र विद्यालय व्यवस्थापनका अध्यक्षको आफ्नै तरिकाले निर्णय गर्ने समितिका सदस्यहरूसँग छलफल नगर्ने, घर घरमा गइ कीर्ते सहीछाप गराउने आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने समिति भएकोले विद्यालयको अवस्था खस्कदै गएको चौलागाइले बताए ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य विक्रम माझीका अनुसार अध्यक्षको ध्यान शैक्षिक गुणस्तर र भौतिक संरचना कसरी निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि विद्यालयको खाता सञ्चालनमा बढी चासो रहेकोे बताए ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य माझीले भने अघिल्लो व्यवस्थापन समितिमा पनी आफु सदस्य रहेको र अहिले पनि सदस्य रहेको बताए तर अहिले व्यवसथापन समितिको मिटिङ सार्वजनिक रूपमा नबस्ने, भित्री रूपमा कागजपत्र तयार गर्ने र हस्ताक्षर गर्ने, कतिपय सदस्यहरूलाई कुनै खबरै नगर्ने गरेको उनको भनाई छ । अध्यक्षले विद्यालयको लेडरप्याड र स्ट्याम्प प्याड खल्तिमा बोकेर हिड्ने अनि केही व्यक्ति बसेर आफू अनुकूल निर्णय गर्दै अन्य सदस्यहरूका घरमै गएर हस्ताक्षर गर्न लगाउने गरेको उनको आरोप छ । उनले भने हामीले त्यसको विरोध गर्दा अहिले हामीलाई बैठकको सूचना नै दिँदैनन् ।“
“भाइलाई विद्यालयमा नियुक्त गरेपछि त झन् अहिले प्रधानाध्यापकलाई नै बाइपास गरेर खाता सञ्चालनको तयारी गर्ने प्रपञ्च हुँदैछ । यो गैरजिम्मेवारी र कानुन सम्मत होइन । हामी माझीकै केटाकेटीहरू त्यहाँ बढि छन् र हामीलाई हाम्रा छोरोछोरी र विद्यालयको भविष्यप्रति चिन्ता छ तर उनीहरूले आफ्ना मान्छेलाई जागिर कसलाई खुवाउने भन्ने चिन्ता छ । हेड सरलाई पनि व्यवस्थापन समितिको निर्णय लागू गर्न बाध्य बनाइदै आएको छ । यसमा हाम्रो सहमति छैन माझीको थप आरोप छ ।
उनले भने, “व्यवस्थापन समितिका कारण विद्यालयको पढाइ मात्र होइन बालबालिकाहरूको भविष्यमाथि पनि खेलवाड भइरहेको छ । शिक्षकलाई मानसिक तनाव दिने, समयमा तलबसमेत उपलब्ध नगराउँद पढाइमा गुणस्तरीयता के होला ? यस्तो अवस्थामा विद्यालयका शैक्षिक सुधार कसरी होला ? २०७२ सालको भूकम्पले चर्काएको भवनमा नै पठनपाठन भइरहेको छ । देशभर नयाँभवन बनेपनि पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयको नयाँ भवन त के मर्मत पनी हुन सकिरहेको छैन । जसका लागि पालिका र वडा र शिक्षा हेर्ने निकायसमेत नतमस्तक रहेका छन् । तसर्थ यहाँका सीमान्तकृत र दलित समुदाय नयाँ पक्की भवन निर्माण गरिदिनको लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा शैक्षिक संघसंस्थाको ध्यान पुगोस माझीले भने ।
बाँकेमा एक साता लकडाउन
बन्द रहेको एम्वुलेन्स सञ्चालन हुँदा लिखुका स्थानिय हर्षित
सेवा निवृत्त चार शिक्षक सम्मानित
६ फाल्गुन २०७७, बिहीबार February 19, 2021 mero
मन्थलीमा तेस्रो राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता सुरु,
रकम अभावले अध्ययन केन्द्र बन्द
२९ कार्तिक २०७७, शनिबार November 14, 2020 mero